इतिहासमा तीन सत्य कुराहरु – इ – डायरी एक्सप्रेस
इतिहासमा तीन सत्य कुराहरु
१. नेपाल एकिकरणमा अरुण नदी पूर्व सिक्किमसम्म सिक्किम कै सेनासँग लडाईं लडियो । तीन पटक लडाईं लडेको प्रमाण छन् । स्थानीय राई – लिम्बु राजासँग लडाईं लडेको कुरा बिलकुल सत्य होइन, राजा पनि थिएनन् । अरुण पूर्वको सबै भूगोल सिक्किमको थियो । बि .स . १८३३ बाट मात्र अरुण देखी सिक्किमको टिस्टा नदीसम्म नेपाल भएको हो । स्थानीय राई – लिम्बुहरु बडाहाकिम जस्तै प्रशासक थिए, सिक्किमे राजाको ।
२. काभ्रेपलान्चोकको कोट तिमाल अर्थात तिमाल कोटमा नेपाल एकीकरणको बेला “ रिन्जिन दोर्जे “ राजा थिए र राजा पृथ्वीनारायण शाहले राजा दोर्जेसँग मीत लगाउछु भनी कोशीको किनारमा बोलाई, बालुवामा लुकाएको तरबारले रिन्जिनलाई पृथ्वीनारायण शाहले मारे भन्ने गफ अहिले काठमाडौं पूर्व र तामाङहरुको बाहुल्य रहेको सबै जिल्लाहरुमा बोलिन्छ, माओबादी नेता हरुले भाषण गर्छन् । यो माओवादीका पन्डितहरुले बोल्न सुरु गरेका थिए । बास्तबमा तिमाल कोट मकवानपुर राज्यको भुगोल थियो । त्यस बखतको गोर्खाली सेनाले ३० दिनसम्म मकवानपुरको सेनासँग लडेर तिमाल कोट जितेका थिए । अर्को कुरा रिन्जिन दोर्जेलाई मकवानपुरको राजाले “मिझार” दर्जा दिएका थिए । स्थानीय प्रशासक हो त्यो दर्जा, बडाहाकिम जस्तै भन्न सकिन्छ । मकवानपुरको अन्तिम राजा दिगबन्धन सेनले बि .स. १८१९ मा रिन्जिन दोर्जेलाई मिजार रिन्जिन दोर्जे लेखी धेरै जमिन बिर्ता दियको कागज अभिलेखमा छन ।
३ .अर्को कुरा नेपालमा मधेस थिएन र छैन । यो भारतमा छ किन भनेः
क ) नेपाल एकिकरणको लडाईंमा गोर्खाली वा नेपाली सेनाले कहिले मधेस भन्ने भुगोल एकिक्रित गरेको थिएन । मधेस कतै थियन। मकवानपुर , तनहुँ, पाल्पा, सल्यान, डोटी लगायत राज्यका तराइ एकिकरण भएका थिए । मधेस भन्ने ठाउमा न त नेपाल एकिकरणमा लडाईं भयो न त नेपाल अंग्रेज युद्धमा भए ?
ख) नेपाल – अंग्रेज युद्धमा समेत कतै मधेस उल्लेख छैन । सुगौली सन्धि र पछिका पुरक सन्धिमा समेत कतै मधेस भन्ने भुगोल उल्लेख छैन । तराइ भन्ने मात्र छ ।
ग) हिन्दूस्थानबाट तिर्थ यात्रा गरेर आउने नेपालीले मधेस नाम लिने, हिन्दूस्थान बाट नेपाल मा धार्मिक तिर्थ गर्न आउनेहरुलाई “मधिसे” भनिने गरेकाले नेपालमा मधेस र मधिसेब्दहरु बोल्न थालियो । बि. स. १८२४ पछि नेपालमा मधेस र मधिसे शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । हो पछि, नेपाल सरकारलेसमेत कतै कतै तराईलाई मधेस लेख्ने गरेका प्रमाण पनि भेटिन्छ जुन त्यो गल्ती हो ।
४ .माथिका मेरा लेखाई प्रमाणको आधारमा रहेका छन् । राजनैतिक घोच–पेचको लागि होइन । तपाईहरुको सुझाबको लागि अनुरोध ।
Previous दलको हैसियतले बारको नेतृत्वमा आउनेहरुले कसरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छन् ?
Next पाकिस्तानी दुतावासको सहयोगमा निशुल्क चिकित्सा शिविर